समझनालाई मन्दिर भित्रै यस्तो गरे,आ रोपित राजेन्द्र बोहराको अर्को कु’कर्म बाहिरियो-भिडियो हेर्नुहोस – Daily NpNews
आज २०७७ मंसिर ११ गते बिहीवारको राशिफल
श्रीमतीसंग पिताको अवै’ध स´म्बन्ध थाहा पाएका छोराले पहिले श्राद्ध गरे र त्यसपछि पिताको ह’त्या
हलका सबै विद्यार्थीले मोवाइल हेर्दै परीक्षा लेखिरहेको भिडियो भाइरल
यी युवती जसले ३९ लाख अमेरिकी डलरमा कुमारी,त्व बेच्ने घोषणा गरेपछि‍…
सजिलै घाँटी,काखी तथा तिघ्रामा भएको कालो दाग धब्बा हटाउने घरेलु उपाय
रत्न पार्क मा यु’वति ले गेष्ट हा’उस जाम भने पछि
पूर्व अधिराजकुमार धिरेन्द्रकि छोरीको यस्तो हर्कत,सामाजिक संजालमा यस्तो हर्कत(भिडियो हेर्नुहोस)
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/समझनालाई मन्दिर भित्रै यस्तो गरे,आ रोपित राजेन्द्र बोहराको अर्को कु’कर्म बाहिरियो-भिडियो हेर्नुहोस
समझनालाई मन्दिर भित्रै यस्तो गरे,आ रोपित राजेन्द्र बोहराको अर्को कु’कर्म बाहिरियो-भिडियो हेर्नुहोस
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ,पुरा हेर्नुहोला ।काठमाडौँ, १२ असोज । नेपालमा को रोना सं क्रमणबाट निको हुने दर सार्क मुलुककै कम पाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार निको हुने दर ७३।४ प्रतिशत छ । हालसम्म को रोना सं क्रमणबाट ५३ हजार ८ सय ९८ जना निको भएका छन् ।
सार्क मुलुकमध्ये पाकिस्तान र श्रीलंकामा निको हुने दर सबैभन्दा बढी छ । पाकिस्तानमा ९५.४ प्रतिशत, श्रीलंकामा ९४.४ प्रतिशत । त्यसपछि तेस्रोमा माल्दिभ्स छ । त्यहाँ निको हुने दर ८३.२, भारतमा ८२.६ प्रतिशत छ । त्यसपछि अफगानिस्तानमा ८३.२, भारतमा ८२.१, भुटानमा ७५.३ र बंगलादेशमा ७४.८ प्रतिशत छ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टा ९आइतबार अपराह्नसम्म० मा ८ सय ८५ जना मात्रै डिस्चार्ज भएका छन् ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नि यन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी सार्क राष्ट्रमध्ये कतिपयले विशेष औषधिको प्रयोग गरिरहेको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘बंगलादेशलगायत केही मुलुकले विशेष औषधि चलाएका पनि छन् । त्यसकारण पनि नेपालबाहेकका मुलुकमा कोरोनाबाट निको हुने दर बढेको हुन सक्छ, डा. मरासिनी भन्छन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
राहत लिएर सिन्धुपाल्चोक पुगिन् एलिजा गौतम ! रुदै पोखिन् सरकार माथि आक्रोस, पिडितहरुको हरिबिजोक (हेर्नुहोस भिडियो)
‘डान्स इन्डिया डान्स’को शो मा जज बनेका टेरेन्स लुइसले नोराको नि’त’म्बमा हा’नेपछि…. (भिडियो हेर्नुस्)
अन्तर्वार्तामै भक्कानिए पाईलट विजय लामा ! मलाई डर लाग्छ…,अधुरै रह्यो आमालाई प्लने चढाउने सपना (हेर्नुहोस भिडियो)
यो’ नसम्पर्क गर्न नपाएर श्रीमती भागी भनेपछि श्रीमती रू’दै आइन ! श्रीमान र सासुले गरे शो’षण र कु’टपिट-भिडियो हेर्नुहोस